1. Maitiro ekugadzira chigunwe cheFrance chinonhuhwirira, chinonaka, mubatanidzwa wakakwana. Zvinotyisa zvekuti haugone kurega kudya
2. French Toast, kana kungozivikanwa sechingwa chakakangwa-mazai, mune yakasarudzika yekumadokero maitiro. Izvo zvaunogona kugadzira mumadhizeti anonaka Izvo zvinogona kupihwa kumafaro Bato kana sechingwa Kuisanganisira sechikafu chamangwanani chinofanira kudyiwa nemukaka, tii kana kofi, uye zvakare inogona kugadzirwa sedizeti yekugashira masikati zvakare. Izvo zvinogona kukuudza kuti chigunwe cheFrance chiri nyore kugadzira, uye kana chakashongedzwa nemuchero mutsva, ichawedzera Kukosha kwehutano Zvakakwana Uyezve, kana ichidyiwa, inoramba ichinzwa kuzorodzwa uye kusimbiswa. ChiFrench Toast zvakare zvakareruka kuita. Kunyangwe iwe usiri kugona pakubika Uyezve hazvina kuoma kugadzirira zvigadzirwa Inogona kutengwa mumusika chitoro Kana zvitoro zviri nyore futi Kana tagadzirira, ngatigadzirirei mbishi zvigadzirwa zveinonaka French Toast Berry. Raw mbichana kugadzirira maitiro seinotevera
3. Zvimedu zviviri zvechingwa chakakora
4. 2 mazai
5. 1 mukombe mutsva mukaka
6. Pini yemunyu yehumwe hunyoro hwekunaka.
7. Muchero weBerry senge mablueberries, sitirobheri, kana chero mhando yemichero.
8. 1 bhanana
9. Mudiwa, zvinoenderana nekuravira kwako
10. Bhata shoma risina kuiswa
11. Gadzirira zvigadzirwa Wobva wadira mukaka mutsva nemazai mundiro. Wedzera munyu mudiki uye rova kuti ubatanidze, kana iwe unogona kushandisa chisanganiso.
12. Dhadza chingwa muzai rakarohwa uye mukaka kumativi ese, mushure meizvozvo pisa pani pamusoro pekupisa kwakadzika uye wedzera bota shoma, kana anenge gumi magiramu. Chichinjanisa kuti uite chingwa chendarama uye chinonhuwira pamativi ese maviri, uye kana chingwa chagadzirira, chiise parutivi woita chimwe.
13. Wobva wawedzera bota shoma pani. Wobva wadimbura bhanana kuita magirazi uye woisa bhotoro Izvo nenzira iyi zvinoita kuti mabhanana awedzere kunakidza
14. Mushure meizvozvo, isa zvidimbu zviviri zvechingwa mundiro. Yakashongedzwa nema berries Kuti uve wakanaka, woisa bhanana rakakomberedza ndiro ndokudira huchi sezvaunoda. Ndizvozvo, chigunwe cheFrance chapera.
15. Makadii Nemaitiro ekugadzira mbiriso yeFrance inogona kugadzirwa nyore, ndinogona kutaura kuti inonaka kwazvo. Uye zvakare menyu yekugamuchira vaenzi Inoshamisira nezvinhu zvakasvibirira zviri nyore kuwana Kuzororo rino, ngatiitei chigunwe cheFrance kuti mhuri kana shamwari vadye pamwe chete, unozopindwa muropa nekunakirwa. Uye iri yakasarudzika menyu iyo inokodzera munhu wese